psa: udinga into eyodwa encane kodwa ebaluleke kakhulu ukufinyelela kwinethiwekhi ye-5g ezimele ye-t-mobile & apos;
none Izindaba Nokubuyekezwa I-PSA: Udinga into eyodwa encane kodwa ebaluleke kakhulu ukufinyelela inethiwekhi ezimele ye-T-Mobile & apos;
I-PSA: Udinga into eyodwa encane kodwa ebaluleke kakhulu ukufinyelela inethiwekhi ezimele ye-T-Mobile & apos;
Akulula neze ukuhambisana nakho konke ukuqhamuka kwe-5G, intuthuko, ukuthuthuka nokukhuliswa ukhishwe ezinyangeni ezedlule futhi kuhlelwe ikusasa eliseduze ngumhlinzeki wesevisi engenantambo wesibili ngobukhulu, kepha nangamazinga ahola umkhakha we-T-Mobile & apos, intuthuko eyodwa yagqama ekuqaleni kuka-Agasti.
Yilapho i-Un-carrier ingakwazanga kuphela ukushaya iVerizon ne-AT & T esibhakeleni, kodwa futhi nakubo bonke abanye opharetha benethiwekhi yeselula emhlabeni ukwethulwa kokuqala kwe-5G okuzimele ezweni lonke . Ukunyakaza okuphukile kwaba ngcono IMagenta & apos; ukutholakala sekuvele kukukhulu kwe-5G ngamaphesenti angama-30, kusatshalaliswa isignali yeselula elandelayo emadolobheni nasemadolobheni acishe abe ngu-2 000 inani eliphelele lezindawo ezinjalo ezingaphezu kwezingu-7 500 ezihlanganisa amakhilomitha-skwele angaphansi kwezigidi eziyi-1.3.
Nakhu ukuthi ungabona kanjani kalula uma udinga iSIM khadi entsha
Ngenkathi ukuxhumana okuzimele kwe-5G kubhekwa kabanzi njengoshintsho lomdlalo wesikhathi eside, umthelela wakho wamanje kusivinini kanye ne-latency kuncane kakhulu. Noma kunjalo, uma ufuna ukulungela ukuthuthuka okuzayo okunikwe amandla yilobu buchwepheshe besimanje, kuzofanele uqiniseke ukuthi uyakwazi ukufinyelela ukwakhiwa okuzimele.
Njengoba kuqokonyiswe ngu I-T-Mobile kwelinye lamakhasi ayo asemthethweni asekelayo futhi njengoba khetha amakhasimende kuthiwa ayaziswa noma akhunjuzwa ngombhalo , ungahle udinge ukushintsha i-SIM khadi yakho ukuze 'unike amandla umuzwa wenethiwekhi omuhle kakhulu we-5G.' Izindaba ezimnandi ukuthi akusebenzi kubaningi ababhalisile be-T-Mo & apos, ngakho-ke ungagijimi esitolo esiseduze okwamanje.
Esikhundleni salokho, into ehlakaniphile kunazo zonke ongayenza ukususa iSIM khadi yakho efonini yakho bese ubheka umbhalo 'R15' obomvana. Uma ungakuthola lokho, ulungele ukuhamba. Uma kungenjalo futhi ubona izinhlamvu 'TM' zilandelwa izinombolo ezi-4, kuzodingeka ushintshele kwi-SIM entsha.
Kepha nakulesi simo, kungahle ungadingi ukuthinta ophethe bese ucela iSIM khadi entsha enhle, njengoba kusho ikhadi elimnandi bekufanele lingene ebhokisini ledivayisi yakho enekhono le-T-Mobile 5G ngesikhathi ithengwa okokuqala noma ukuthunyelwa. Ngakho-ke, yebo, mhlawumbe kuwumqondo omuhle ukuthola lelo bhokisi bese uhlola ukubona ukuthi ukhohlwe i-SIM khadi ngaphakathi, unamathela endala ngenxa yobudedengu noma ubuvila.
Inombolo yamafoni ahambisanayo isethwe ukuthi ikhule maduze
Ngokungeziwe ku-SIM khadi ehambisana ne-5G ezimele, kunjalo, nawe uzodinga ihendisethi esekela ubuchwepheshe, futhi yize i-T-Mobile ihlela 'ekugcineni' ukuletha izibuyekezo zesoftware kuwo wonke amadivayisi anekhono we-5G ukuze isebenze isici, lokho akukaze kwenzeke okwamanje.
Ngeshwa, alukho uhla oluphelele nolusemthethweni lwama-smartphones ahambisanayo njengamanje, kepha siyazi ukuthi umndeni wakwaSamsung & apos; s Galaxy S20 uthole ukuvuselelwa okudingekayo okungenhla esikhathini esedlule, ilandelwa yi-Galaxy Note 10+ 5G ekuqaleni kwaleli sonto.
I-Samsung Galaxy Note 10+
Uma kwenzeka uzibuza, ukuxhumana okuzimele kwe-5G kuhluke ngokuphelele kusiginali engeyona eye-standalone (NSA), esebenza ngokuzimela kunethiwekhi ye-4G LTE futhi ngaleyo ndlela ithembise ukukhushulwa okukhulu kwejubane kanye ne-latency enciphise kakhulu ... kwesinye isikhathi phansi komugqa .
Ngokusobala, zombili I-Verizon futhi i-AT & T banezinhlelo zokulandela isudi yeT-Mobile & apos; kule nkambu ebaluleke kakhulu yentuthuko ye-5G kungekudala, ngenkathi UDish uhlose ukwakha inethiwekhi yayo ye-5G ekwakhiweni okuzimele kusukela phansi kuya phezulu, ngaphandle kobuchwepheshe be-4G LTE bokuthembela ekukhishweni kwe-5G okungajwayelekile.
Umthamo wesamsung galaxy s21 ultra screen
icala le-s7 onqenqemeni nge-kickstand
bukela umdlalo wezihlalo zobukhosi ukuvuza
I-Google & apos; s Daydream VR ifile, ukwesekwa kugcina nge-Android 11
AbakwaSamsung bayibulale kanjani i-Android Wear nokuthi kungani iGear S4 ingawinanga i-Wear OS
Kungani Abaphathi be-QA Bengadingeki Kumaphrojekthi we-Agile
I-LG G5 vs LG V10: ukubukeka kokuqala
I-Apple ingeza Ukucinga Ngezithombe ku-Spotlight ku-iOS 15
Ungayivula kanjani i-PIN noma i-smartphone evikelwe ngephethini ye-Android
Ukubuyekezwa kokuqhathanisa kwe-Samsung Galaxy S20 Plus ne-Galaxy S10
Phakamisa umdlalo wakho wokuthumela imiyalezo ngalezi zinhlelo zokusebenza ezi-5 ezinhle ze-SMS ne-MMS zabasebenzisi be-Android
Ukubuyekezwa Kwezinga le-Samsung
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze-Android ezingenza abasebenzisi be-iOS baluhlaza ngomona